yintoni induction shrink efanelekileyo? Ukungeniswa kunciphisa izixhobo ezifanelekileyo kunye neeringi
Ikhaya / izicelo / Ukunciphisa ukuFaka / yintoni i-induction eyancipha efanelekileyo
Udidi: Ukunciphisa ukuFaka tags: thenga ukufudumeza okufudumeleyo, zokushushumbisa iinkqubo, Ukuchithwa kwehlisa ukulungiswa, ukufudumeza kuncipha, Nciphisa ukufaneleka, nciphisa iivili zegiya ezifanelekileyo, nciphisa izixhobo ezifanelekileyo, Nciphisa i-shaft fitting, Nciphisa izixhobo ze-shaft ezifanelekileyo, yintoni i-induction eyancipha efanelekileyo
Yintoni induction shrink efanelekileyo?
Ukuchithwa kwehlisa ukulungiswa Umsebenzi olula obandakanya ukucuthwa okanye ukwanda kwelinye icandelo kwelinye ukubangela uphazamiseko kunye nophuhliso loxinzelelo, olubambe ezi zinto zimbini ngokudibeneyo.
Indlela nganye yokufumana iindawo kwindibano inezibonelelo ezizodwa. Kwimeko yokuncipha kokuncipha, iinxalenye ezenziwe ngayo nayiphi na intsimbi zinokudityaniswa: intsimbi ukuya kwisinyithi, isinyithi ukuya kubhedu, i-aluminium ukuya kwisinyithi, i-magnesium ukuya kwintsimbi, njl.njl. Isakhiwo se-metallurgical njengase-tempering okanye kwi-melting. Ngenxa yokufumaneka koxinzelelo, iimpembelelo zokuncipha kokuvavanywa kufuneka kuvavanywe kwindibano ebalulekileyo.
Ukuziqhelanisa, umsebenzi ulula, ufuna ukulungiswa okuncinci komphezulu, ulawulo oluncinci, kwaye akukho kucoca emva kwendibano rhoqo. Kuba amandla okhuseleko ngoomatshini, i-oxidation engaphezulu okanye ukungcola akuphazamisi, kuthintela nasiphi na isidingo sokusetyenziswa kokuhamba. Iinxalenye ziqokelelwe kufinywa kufaneleka zinokuhluthwa ngokukhetha ukufudumeza icandelo elingaphandle. Le nkqubo ilungele ngokukodwa ukufudumeza i-induction ngenqanaba lokufudumeza ngokukhawuleza kunye nokuchaneka, okuvumela ukutshintshwa kwamalungu agugileyo okanye ukulungiswa kokulungelelaniswa.
Ukutshisa ukutshisa ihlala inika izibonelelo ezizodwa ekunciphiseni ukufakwa. Ukufudumeza kunokubekwa kwindawo ekuhlala kuyo, kubonelela ngokwandiswa okwaneleyo ekuhlaleni ukuze unciphise ngaphandle kokufudumeza into enkulu okanye isixhobo esenziwe ngocoselelo, ukunciphisa ukuphazamiseka. Oku kufudumeza ngokukhawuleza, okukhethiweyo kukwaququzelela ukungahambelani kwezinto ezifakwayo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla. Ukongeza, ukufudumeza ngokungeniswa kubonelela ngenkqubo engenacala, ekhawulezayo, enokuphinda ibandakanywe kwimveliso yokuphatha ubuncinci kunye nokuzenzekelayo.
I-HLQ zokushushumbisa iinkqubo zisetyenzisiwe kwishishini leemoto ukunciphisa izixhobo ezifanelekileyo kunye nemisesane. Bakwasebenzela ukulungisa iinqwelomoya, oololiwe neelori. Iinkqubo zethu zeselfowuni zisetyenziselwa ukunciphisa imisebenzi efanelekileyo kumaqonga aselunxwemeni kwaye ziya zisetyenziswa ngakumbi ukususa amandongomane amakhulu kunye neebholithi koomatshini bomoya.
Ngokuqhelekileyo, isinyithi siya kwanda ngokuphendula ukufudumeza kunye nekhontrakthi xa kupholile. Le mpendulo ibonakalayo kutshintsho lobushushu yaziwa njengokwandiswa kwe-thermal. Ukungeniswa kokuncitshiswa kokuncipha kulapho sisebenzisa khona esi siphumo ukuze silungele okanye sisuse iindawo. Icandelo lesinyithi lifudunyezwa liphakathi kwe-150 ° C kunye ne-300 ° C ebangela ukuba ikhule kwaye ivumele ukufakwa okanye ukususwa kwelinye icandelo. Xa, umzekelo, ulungelelanisa iinxalenye ezimbini zombhobho ngokudibeneyo, elinye icala liyafudunyezwa de ububanzi bayo bandiswe ngokwaneleyo ukuba bulingane kwelinye icala. Xa amalungu adityanisiweyo ebuyela kubushushu obufudumeleyo, indibaniselwano iyaxinana kwaye yomelele- 'shwabanisa ifakelwe'. Ngokunjalo, ukwanda kwe-thermal kunokusetyenziselwa ukukhulula ngokudibeneyo ngaphambi kokudiliza.
Inkqubo yokulawulwa, ukungaguquguquki, ukuchaneka kunye nesantya zizibonelelo eziphambili zokungeniswa kwe-induction. Ukungeniswa kobushushu bokungenisa kuchanekile kakhulu. Ngenxa yobushushu obuveliswayo ngaphakathi kwecandelo, ushushu kuphela inxalenye ofuna ukuyitshisa, hayi umoya ojikeleze yona. Kanye nokunciphisa umngcipheko we-ovality, oku kusebenza ngamandla. Ukongeza, kuba ukungeniswa kuvelisa ubushushu obungaguquguqukiyo obufanayo, oku kuhlala kuvumela ubushushu obuncinci ukuba busetyenziswe. Ulawulo lobushushu luchanekile ngolawulo oluchanekileyo lwamaxesha anyukayo kunye nokubamba kwamaqondo obushushu. Ngokungafaniyo neendlela zokufudumeza ngokwesiko, ukwenziwa akubandakanyi malangatye ahamba ze. Oku kuvumela ukungeniswa kwe-shrink efanelekileyo ukuba isetyenziswe kwizicelo ezahlukeneyo kwiindawo eziguquguqukayo, ngakumbi kwizicelo zepetrochemical.
Iintlobo ngeentlobo zamashishini kunye nokusetyenziswa kunokuxhamla kulwakhiwo olunciphisayo. Iinkqubo zethu zokufudumeza ungeno zisetyenziswa kushishino lweemoto ukunciphisa izixhobo ezifanelekileyo, ukuthwala kunye namakhonkco. Baqeshwe kumashishini oomatshini kunye nasekugcinweni kweenqwelomoya noololiwe. Iinkqubo zethu zeselfowuni zisetyenziselwa ukunciphisa imisebenzi efanelekileyo kwiinqanawa nakumaqonga onxweme kwaye zisetyenziswa ngakumbi ukulunga kunye nokususa amandongomane amakhulu kunye neebholithi koomatshini bomoya kwizikhululo zamandla ombane kunye neebheringi kunye nemingxunya kwiijenereyitha zamandla omoya.
Inkqubo yoqheliso yokuncipha isetyenziswa rhoqo kwezi nkqubo zilandelayo:
• Ukufakela amavili egiya (amaphiko kwimiphini, njl. Njl.)
• Ukugquma izixhobo zokucinezelwa kwesiqandisi
• Iitampu zeMorse zezixhobo zomatshini
• Indawo ezijikelezayo zeinjini zomoya.
Isihlanu sihlangabezana nenkcazo yazo zonke iintlobo zamacandelo ezobuchwephesha kumzi-mveliso we-aerospace kunye neenkqubo eziqinisekisa oko ukuchithwa kokunciphisa ukufaneleka Ukuchaneka kwaye ungangcolisi imiphezulu yangaphakathi, ngakumbi xa kudityaniswa amalungu abuthathaka.
Ukukhangela Ukutshisa Ukushisa I-Flange
Ukukhutshwa kweNdawo yokuNciphisa ukuThengiswa kweziThengiso
Ukuchithwa kwehlisa ukuFometha
Ukuxhoma Ukutshaya Ukunciphisa amaShafti afanelekileyo kunye neenqwelo